Fantatrao ve ny mahasamihafa ny SEO (Search Engine Optimization) sy ny SEM (Search Engine Marketing)? Izy ireo dia lafiny roa amin'ny farantsakely iray ihany. Ireo teknika roa ireo dia ampiasaina hanangonana fifamoivoizana amin'ny tranokala iray. Fa ny iray amin'izy ireo dia akaiky kokoa, mandritra ny fotoana fohy. Ary ny iray hafa dia fampiasam-bola maharitra. Efa fantatrao ve hoe iza amin'izy ireo no tsara indrindra aminao? Eny, raha mbola tsy fantatrao, eto
Inona no atao hoe Marketing Digital
Alakamisy, May 30, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Nanana infografika mitovy amin'izany izahay momba ny fizotry ny varotra miditra, ny ekosistemin'ny marketing miditra, ny fiakaran'ny marketing anatiny ary na ny infographic aza amin'ny fitomboan'ny marketing inbound. Raha ny varotra miditra dia mifantoka indrindra amin'ny fahazoana fitarihana amin'ny alàlan'ny ezaky ny varotra nomerika anao, ity dia sary iray avy amin'i Pixaal, Inona no atao hoe Digital Marketing? Infografika tena tsara izy io, fa ny marketing dizitaly dia manana singa vitsivitsy hafa - marketing video, ho an'ny endrika Call-To-Action,